Okumnyama okuBrown: izici, imvelaphi kanye nokufuna ukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Phakathi kwezinto zezinkanyezi esingazithola emkhathini sinokuthile okuyimfihlakalo futhi okungajwayelekile. Imayelana ne- into encane ensundu. Akuyona nje inkanyezi kepha yehlukile kokunye ngesizathu esilula: ayikwazanga ukuqala inqubo yokuhlanganiswa kwezinto zenuzi ngezinto zayo. Izinkanyezi zinokuqukethwe ngaphakathi okuqala ukusabela kwe-fusion yenuzi ngenxa yezici zayo. Kodwa-ke, bayizinkanyezi ezilula ukuziphutha ngamaplanethi aziwa ngokuthi yimidondoshiya.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, imvelaphi nezimfihlakalo zomuntu onsundu onsundu.
2 Umsuka womuntu onsundu onsundu
3 Isigaxa esinsundu esimisweni sethu sonozungezilanga
Luhlobo lwento ye-stellar enemfihlakalo ethile ezungezile. Futhi akuyona inkanyezi uqobo, ngakho-ke ingadideka kalula ngamaplanethi okuthiwa amakhulu. Ngakho-ke, sichaza isigaxa esinsundu njengento esezingeni eliphansi leyo ayikwazi ukukhiqiza ukusabela kwenuzi njengenkanyezi ejwayelekile. Ayinaso isisindo esanele sokukwazi ukukhiqiza ubuqili bayo njengenkanyezi. Lezi izizathu eziyinhloko zokuthi kungani kungadideka kalula neplanethi.
Yinto yezinkanyezi esendaweni ephakathi nendawo phakathi kweplanethi nenkanyezi. Kungashiwo ukuthi ziyizinto ezisemkhathini ongaphandle futhi ezihlala kule ndawo ngoba azinaso inani lobunzima obudingekayo ukuze zikwazi ukukhanyisa njengenkanyezi ejwayelekile, yize ubukhulu bazo kwesinye isikhathi bukhulu kuneplanethi. Azikhanyi njengenkanyezi ejwayelekile kepha zikhanya kwi-infrared.
Zijwayele ukuba nesisindo esingaphansi kuka-0.075 selanga noma zicishe ziphindwe ka-75 isisindo seplanethi iJupiter. Izazi eziningi zezinkanyezi zidweba umugqa phakathi kwemifantu ensundu kanye amaplanethi ngosayizi wezixuku eziyi-13 zeJupiter. Lesi yisisindo esidingekayo ukusungula ukuhlangana kwenuzi. Futhi ukuthi inamandla okukhiqiza amandla ngokuhlangana kwe-deuterium, eyi-isotope ye-hydrogen. Lokhu kwenzeka eminyakeni eyizigidi zokuqala ubudala. Isigaxa esinsundu sivimbela ukuqhubeka kokuncipha kwempilo njengoba ama-nuclei eminyene ngokwanele ukumelana nengcindezi etholwa ukwehla kwama-electron ngesikhathi senqubo yokuhlangana kwenuzi.
Umsuka womuntu onsundu onsundu
Iningi lemifino ensundu yimifino ebomvu ehlulekile ukudala ingxube yenuzi. Inekhono lokuba namaplanethi azungezile futhi ingakhipha ukukhanya yize ibuthakathaka ngandlela thile. Esinye isici ukuthi babanda ngokwanele ukugcina umkhathi njengeplanethi. Kungenye yezizathu zokuthi kungani kuvame ukudideka ngamaplanethi osayizi omkhulu. Izinga lokushisa ebusweni bemifino emikhulu lincike ebuningini bomfino nobudala bayo. Njengoba sishilo ngaphambili, lapho amancanyana ansundu esemncane anezinga lokushisa elifinyelela ku-2800K, ngenkathi zipholisa ngaphansi kwezinga lokushisa kwe-stellar cishe nge-1800K.
Yakhiwe ikakhulukazi nge-hydrogen yamangqamuzana futhi ibanda kakhulu ngoba amazinga okushisa aweqi ku-100 degrees Kelvin. Uma ibukwa ngesibonakude, indawo emnyama, e-opaque iyabonakala. Lawa ngamafu enziwe ngezinto zokusetshenziswa lapho kwenziwa khona into encane ensundu. Umsuka wensundu ensundu uza njengomkhiqizo ovela ekuziphendukeleni kwe-stellar kwehlulekile. Futhi ngukuthi lapho ifu legesi liwa ngokwalo, kuphakamisa ukwakheka kweprotostar. Ungasho ukuthi iprotostar ngumbungu wenkanyezi. Ama-Protostars avame ukuphatha ukuthola isisindo esanele kanye nezinga lokushisa elifanele ukuqala ukubumbana kwenuzi. Ukuhlanganiswa kwe-nyukliya kwenzeka ngezinto ezinombala omncane onsundu. Ngale ndlela, iba inkanyezi esigabeni esikhulu sokulandelana.
Kunezimo lapho omnyama abansundu sebemile khona futhi bengakwazi ukuthola isisindo esanele ukwenza i-hydrogen iqale ukusebenza ne-helium. Siyakhumbula ukuthi ukuze i-nyukliya ihlangane kwenzeke akudingeki kuphela amazinga okushisa aphezulu, kodwa futhi nengcindezi ephezulu edalwa yisisindo esikhulu. Ngale ndlela, izinga lokushisa lingaqiniswa ngaphambi kokuba libe yinkanyezi.
Isigaxa esinsundu esimisweni sethu sonozungezilanga
Ososayensi baphinde bafunda ukuthi kungenzeka yini ukuba bakwazi ukuhlala emaplanethi azungeza umfanyana onsundu. Lokhu kungenzeka sekufundwe iminyaka eminingi futhi bekucatshangwa ukuthi izimo zenye yalezi zinkanyezi yokuba neplanethi ekuhlalwa kuyo ziqinile impela. Isizathu esikhulu ukuthi indawo okungahlalwa kuyo okuthiwa ososayensi, incane impela. Awunakuhlala endaweni encane ensundu ngoba ukweqa komjikelezo kuzodingeka kube phansi kakhulu ukuvimbela ukwakhiwa kwamandla olwandle. La masango olwandle anesibopho sokukhiqiza umphumela ongalawuleki wokushisa okungahle wenze imvelo ingahlali ngokuphelele.
Isigaxa esinsundu satholakala esimisweni sethu sonozungezilanga ebangeni leminyaka engu-98 lokukhanya ukusuka elangeni. Lokhu kutholakala kwenziwa ngewebhusayithi esiza abantu abaningi ukuthi bathole izinto zezulu ezisekude nomgwaqo weNeptune.
Ake sibheke ezinye zezilangazelelo ezinabafushane abansundu abanazo:
Umbala wangempela wezinkanyezi ezinsundu awunsundu. Umbala obomvu ngokubomvu.
Lezi zinto zasezulwini zinama-aurora anamandla kakhulu kunanoma iyiphi i-aurora etholakele yatholakala ohlelweni lwethu lwelanga.
Kunemifantu emincane ensundu enamazinga okushisa aphansi ngokweqile. Ezinye zazo zingathintwa ngaphandle kokushiswa njengoba zinamazinga okushisa angaphansi kuka-100 degrees Celsius.
Kodwa-ke, banamandla adonsela phansi anamandla ngokwanele ukuthi akuvunyelwe ukuba lapho. Esimweni lapho sizame khona ukuya besingacindezelwa khona manjalo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nemifantu ensundu nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umdaka onsundu